"Izingoma zokuphila nethemba" ubumnandi bukaRubén Darío | Izincwadi Zamanje
Ngomnikazi URubén Darío kucace bha lapho ebhekisa emsebenzini wakhe "Songs of Life and Hope." Lapho ebuzwa ngaye, wathi okulandelayo: << «Blue» kufanekisela ukuqala kwentwasahlobo yami kanye ne- «Iprose prose»Intwasahlobo yami egcwele; "Izingoma zempilo nethemba ziqukethe izinto ezihlakaniphile zasekwindla yami." Asikwazanga ukuqala lo mbhalo ngokuchaza okuqukethwe komsebenzi ngendlela engcono kunokucaphuna amagama ombhali wawo.
Futhi ukuthi kusukela ekuqaleni komsebenzi ungabona ukuvuthwa kwezinkondlo kukaDarío, othe evesini lakhe lokuqala uthi "Yimina osanda kusho izolo ..." abhekise kuye ukukhulelwa kombhalo futhi inkulumo yakhe ikhule ukuze yakhe umsebenzi osikhathazayo namhlanje, lapho kuvela khona umcabango oguqukayo wembongi yaseNicaragua ebabazekayo, okwathi eminyakeni edlule yakha imibono yayo.
Isisho esikulezi zinkondlo sithi kusangulukile kakhulu, engakususi ekubukekeni kwesichazamazwi sayo, esiqhubeka nokugcizelela ubukhosi bomqondo, ubuciko bezobuciko nokudelela konke okungekho ekujuleni nasekuphakameni, okungukuthi, kuyazikhulula uhlobo lwempi yokulwa nokuzimela , okungumbongi okwehlisa isithunzi somuntu.
Kulesi sigaba esisha, uDarío unquma ukushiya i- «yakheUmbhoshongo wezinyo lendlovu»Futhi njengoba yena ngokwakhe esho kwelinye lamavesi akhe, uyazi ukuthi uyimbongi yabambalwa abakhethiwe nokuthi ngaphandle kokuthi uquqaba olukhulu alunazo izilaleli zakhe, uzizwa enesibopho sokujwayelana nokuhlangana nabo ukuze ukufeza umsebenzi wakhe wezenhlalo. Kungakho izingqinamba zepolitiki zivela ngokuqinile emakhasini ale ncwadi ngoba kuyena cishe kuyisibopho sokunanela imizwa nezidingo zabantu uqobo.
Imininingwane engaphezulu - Prosas Profanas, okusha kukaRubén Darío
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » "Izingoma zokuphila nethemba", umsebenzi omkhulu wesithathu kaRubén Darío
UGladys Lopez Malespin. kusho
NgingowaseNicaragua evela ezweni lakithi lembongi yethu ehlonishwayo uRuben Dario. Ngiyanihalalisela ngalezi zibonakaliso maqondana nemisebenzi emithathu ebalulekile eyaletha uguquko ku-Modernism. Ngikuthanda ukulula nobuhle njengoba bekubeka kanjalo. Umuntu uzizwa eqhubeka nokufunda.
Phendula uGladys Lopez Malespin.
UKarina Rizo Juarez kusho
Unayiphi injongo uRuben dario ezingomeni zakhe zomsebenzi zezimpilo futhi unethemba lokuthi iyini injongo yomsebenzi wakhe?
Phendula uKarina Rizo Juarez
Ukuphakanyiswa Kwemiklomelo ye-Harvey ka-2012